Xildhibaan Mustaf Dhuxulow oo kulan la qaatay qaar kamid ah dhalinyarada uu matalo – Kalfadhi
May 20, 2019 May 20, 2019 Kalfadhi
Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo katirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay qaar kamid ah dhalinyatada aqoonyahaanada ah ee uu ku matalo kursiga Xildhibaanimo ee baarlamaanka Soomaaliya.
Dhalinyarada kulanka ka qayb-gashay ayaa su’aalo waxyaabihii uu qabtay ah weydiiyay Xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya isagoo ka jawaabay su’aalihii la waydiiyay. Dhalinyarada kulanka lagu casuumay waxaa ku jiray tiro ka mid ah kuwii codkooda siiyay Xildhibaanka ee ku soo doortay magaalada Cadaado sanadkii 2016-kii kuwaas oo qaarkood aan furasd u helin in ay la kulmaan tan iyo markaas.
Inta la galay bishan barakeysan ee Ramadaan waxaa dhacay dhowr kulan oo ay sameeyeen Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo ay kula kulmayeen dhalinyarada ay kursiga ku matalaan, iyagoo warbixino ka siinayay xaalada guud ee dalka iyo howsha ay hayaan.
Mustaf Dhuxulow ayaa katirsan baarlamaanka Soomaaliya 10kii sano ee la soo dhaafay waxa uuna sidoo kale dalka ka soo qabtay xilal kala duwan, sida in uu mar ka soo mid noqday Golaha Wasiirada Soomaaliya. Xildhibaan Dhuxuloow ayaa lagu xasuustaa in uu aad u caawiyo dadka danyarta ah iyo dhalinyarada danta yar ee ku hamiya in ay shaqeestaan.